Fanandratana amin'ny fahitalavitra sy latabatra
Tamin'ny taona 2017 dia nanatrika ny MEDICAL FAIR INDIA 2018 tany India i Yuyao Sanxing.
Tamin'ny taona 2017 dia nanatrika ny MEDICAL 2017 tany Dusseldorf i Yuyao Sanxing. Izy io dia ny varotra varotra mpitsabo eran'izao tontolo izao, ary ny laharana voalohany amin'ny indostria ho an'ireo mpamatsy ny indostrian'ny teknolojia ara-pitsaboana, COMPAMED. Amin'ity foara ity dia manana fotoana hihaonana amin'ireo mpanjifantsika Alemanina mahazatra izy ireo, ...
Tamin'ny taona 2018, nanatrika ny MEDICAL FAIR INDIA 2018 tany India i Yuyao Sanxing.
Tamin'ny taona 2018, nanatrika ny MEDICAL FAIR INDIA 2018 tany India i Yuyao Sanxing. Fetiben'ny varotra malaza any India ho an'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny fitsaboana. Amin'ity foara ity dia manana fotoana hihaonana amin'ireo mpanjifanay Indiana mahazatra izy ireo ary hahazo mpanjifa vaovao 115. Fiarahabana! (Mandray i Sophie ...
Tamin'ny taona 2017 dia nanatrika ny fampirantiana KIMES tany Korea i Yuyao Sanxing.
Tamin'ny taona 2017 dia nanatrika ny fampirantiana KIMES tany Korea i Yuyao Sanxing. Seho iraisam-pirenena momba ny fitsaboana sy hopitaly io. Amin'ity fampirantiana ity dia manana fotoana hihaonana amin'ireo mpanjifanay Koreana mahazatra izy ireo ary hahazo mpanjifa vaovao 92. Fiarahabana! (Maria dia mandray mpanjifa amin'ny sary ...
Malaza ampiasaina amin'ny fanaka sy ny birao izy io. Toy ny faran'ny fandriana, ny kabinetra sy ny birao. Ny foto-keviny dia ny miankina amin'ny fiakarana sy amin'ny fidinan'ny actuator linear mandroaka ny fisondrotan'ny TV. Manoro hevitra izahay hampiasa miaraka amin'ny adaptatera sy ny lavitra tariby, izay ...
Actuator Linear Micro, Actuator haingam-pandeha haingam-pandeha, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana elektrika, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana fitsaboana, Fanaraha-maso lavitra an-tariby ho an'ny hopitaly, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana any amin'ny hopitaly,